I-Kepyok(2) - I-Airbnb
Ifama sinombuki zindwendwe onguYasmin Yoko
Khawufane ucinge ngendawo enomtsalane engekude kakhulu nesixeko, ejikelezwe ziindawo eziluhlaza kunye nezilwanyana zasendle ezinoxolo, ukuvuselela imimoya ediniweyo? Wamkelekile kwi KEPKOK.
E-KEPYOK, sifuna ukuba uzive usekhaya. Indlu yethu yeendwendwe yahlulwe yangamacandelo amabini. Icandelo lokuqala yiseti yeendawo eziqhelekileyo esizibiza ngokuba yi-Rumah Agong ebandakanya igumbi lokuhlala, igumbi lokutyela kunye nekhitshi elungiselelwe ngabom ukuze zonke iindwendwe zibe nokwabelana, ukuqokelela kunye nokusebenzisana nangaliphi na ixesha kulo lonke ixesha lokuhlala.
Icandelo lesibini yindawo yethu yeChalets nangaphaya. Sibonelela ngeeyunithi ezi-3 zamagumbi amane obutofotofo e-chalet eyilwe ngendlela yale mihla encinci yokubhiyozela ubunzulu beTropiki.
Ezinye zezindlu zethu zokulala zineseti yeebhedi ezingamawele eziyilwe ngendlela enika imvakalelo yendawo engcwele kubahlali. Kwigumbi ngalinye lokulala, iindwendwe zizokonwabela igumbi lethu lokuhlambela eline-en-suite eneshawari yemvula ukwenzela loo mava okuhlamba anobunewunewu.
Kwabo bafuna ukuthatha inyathelo eliya phambili, sikwabonelela ngendawo yokuhlambela esecaleni kwedama leentlanzi.
Ngoko kuthekani ngokuhlamba ngokuzolileyo ngeentlanzi zokuqubha kunye nomthombo wamanzi okuphumla ngasemva?
Uyilo olupheleleyo lwe-KEPYOK lwenziwe ngezitena kunye nolwakhiwo lwamatye olunikezelwe ngethayile yendalo yeTerracotta kunye neTeak wood.
Xa ulala kwi-Rumah Agong, ungalibali ukujonga phezulu kwisakhiwo sethu sesilingi esenziwe nge-teak eqinileyo-ngokuzingca ngumsebenzi wobugcisa ngokwawo. Ezi zixhobo zendalo zikhupha i-ambience efudumeleyo nepholileyo yetropiki eba ngumphefumlo wendawo yethu.
E-KEPYOK, uninzi lweempahla zethu zefenitshala zikwakhethwe kuluhlu olubanzi lweTeak, iMahogany, kunye neCengal wood kunye nerattan yendabuko yaseJavane.
Ngokunzulu kwindlu yethu yeendwendwe, umntu unokufumana ichibi elihle lokuqubha elisuka kude ne-chalets kwaye lenze ilizwe lakho labucala.
Imeta malunga ne-5m x 13meters ubude, idama lethu lokuqubha lenziwe ngethayile yeLampan eluhlaza okwesibhakabhaka emenyezelayo elangeni.
Ngokwenene yeyona ndawo ifanelekileyo yokuchitha iiyure uphumle phakathi kwempepho epholileyo.
Ngeli xesha, kwabo baziva bengaphandle kancinci, zive ukhululekile ukuba uphumle kwi-gazebo ephezu kwenduli, okanye uzulazule kwiyadi engaphambili engqongwe sisitiya sethu.
IGazebo ibonelela ngombono omangalisayo malunga ne-KEPYOK apho iindwendwe zinokubethwa ngumoya wangokuhlwa, okanye zibambe ubuhle bokuphuma kwelanga kusasa.
4.78 · Izimvo eziyi-33
Ibekwe kufutshane neBeranang kunye neSemenyih, i-KEPYOK yimizuzu engama-30 yokuqhuba ukusuka entliziyweni yeKuala Lumpur kunye nesikhululo seenqwelomoya saseKLIA. Yeyona ndawo ifanelekileyo kwabo bacwangcisa umnyhadala wabucala wangaphakathi kwabo bafuna uhambo olukhawulezayo lwempelaveki bekhangela uxolo noxolo.
Ifakwe nzulu ngaphakathi kwilali yezolimo, le ndawo yokuhlala iphantse yaqinisekiswa ukuba iza kunika iindwendwe zayo ukuphumla okufunekayo kunye nokuzola kude netrafikhi yesixeko.
Umbuki zindwendwe ngu- Yasmin Yoko
Owner is a couple of Malaysian and Japanese. We love nature, animals, books and travel.
we build our private resort which named 'KEPYOK"(meaning he gate) concept of Jawanese style with own design idea in 2013 completed, and you can feel warm wooden deco and bricks building in nature surrounding tropical atmosphere.
we build our private resort which named 'KEPYOK"(meaning he gate) concept of Jawanese…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Beranang